IYunivesithi yaseHodges Yazisa ngePET Hodges Qhagamshela »IYunivesithi yaseHodges
Ukuzalisa iSithuba soMsebenzi ngePhulo loQeqesho: IYunivesithi yaseHodges ibhengeza iHodges Connect
Umsantsa wezakhono zabasebenzi yinto imibutho emininzi yophuhliso lwamashishini ebixoxa ngayo iminyaka. Imibutho ifuna izisombululo. IYunivesithi yaseHodges iyayiphendula loo fowuni kunye noqeqesho lwayo lobungcali, i-Professional Education and Training (PET), ebizwa IHodges Qhagamshela.
"IHodges Connect yenzelwe ukulungiselela abasebenzi kunye nezakhono ezifunwa ngumqeshi eziyimfuneko ukuze baphumelele kwimarike yomsebenzi yanamhlanje nangomso, utshilo uGqirha John Meyer, umongameli weYunivesithi yaseHodges. “Eli qonga litsha liza kubonelela ngeeworkshops, iiklasi, kunye neenkqubo ezinokuthi zenziwe ngokwezifiso ukuze zilungele naliphi na ishishini, kwaye zenziwe ngabantu okanye njengeqela elidibeneyo. Konke oku kukunika abasebenzi bethu olo khuphiswano. ”
Ezi nkqubo zophuhliso lwabasebenzi zinobude obahlukeneyo kwaye ziyilelwe ukunika abathathi-nxaxheba kwangoko izakhono ezifanelekileyo abanokuzisebenzisa ngosuku olulandelayo. Oku kwahlukile kwiinkqubo zemfundo zemveli ezinikezelwa yiYunivesithi, kwaye zinokuthathwa nguye nabani na onomdla. Akukho vavanyo lwaphambi kokungeniswa okanye amava eekholeji zangaphambili, okanye idiploma yamabanga aphakamileyo iyafuneka.
Umasifundisane wokuqala, inkqubo yesatifikethi soMlawuli weSigaba sokuQala, ngoku iyafumaneka kwaye yamkela ubhaliso. Inkqubo iyafumaneka zombini njengeworkshop kwikhampasi yeYunivesithi yaseHodges okanye kwi-Intanethi ngokupheleleyo.
Ukugqitywa kwale fomathi, abaphumeleleyo baya kufumana iSatifikethi seSuphavayiza yokuQala kwiDyunivesithi yaseHodges.
Kutheni uQeqesho loMlawuli weSigaba sokuQala?
"Uluhlu lweMisebenzi yokuFunwa kweMimandla ye-2019-2020 ibonisa isidingo esikhulu seesuphavayiza zokuqala ezineendawo ezivulekileyo ezingaphezu kwama-4,000," utshilo uGqirha Meyer.
Iindawo ezifuna iisuphavayiza zomgca wokuqala zibandakanya abasebenzi kwezokwakha nakwizinto ezikhutshiweyo, oomatshini, abafaki kunye nabalungisi, ukuthengisa okungathengisiyo, iofisi kunye nenkxaso yezolawulo, inkonzo yobuqu, ukuthengisa ngentengiso, ukugcinwa kwezindlu kunye nokugcinwa kwempahla, ukulungiswa komhlaba kunye nenkonzo yengca, kunye nokuhamba kunye nezinto Ukuhambisa umatshini kunye nabaqhubi bezithuthi.
I-PET Hodges Qhagamshela
I-PET Hodges Connect Initiative ineenkqubo ezongezelelweyo kunye nezicwangciso zokongeza ngokuqhubekayo iminikelo emitsha njengoko kufunwa ngumzi mveliso.
Ezinye iinkqubo ezikhoyo zibandakanya iSatifikethi sokuSebenza ngokuSebenza (i-PEC) -iinkqubo ezintlanu ezijolise kuphuhliso lwezakhono ezithambileyo kwitekhnoloji, unxibelelwano kunye neshishini- kunye. Ubungcali kwiSatifikethi saseMsebenzini-ikhosi emfutshane yokulungiselela abafundi ukuba baqeqeshelwe umsebenzi, okanye nawuphina umntu ofuna umsebenzi wakhe wokuqala. Ezinye iindibano zocweyo ezikhoyo zibandakanya umahluko wokuveliswa emsebenzini, ukusuka kwintanga ukuya kwinkokeli, kunye nobuchule benkcubeko. Ezinye izihloko zocweyo zibandakanya ukusonjululwa kwempixano, iziseko zolwimi lomzimba, ukuba ngumphathi othandekayo, inkuthazo yabasebenzi, ubukrelekrele bemvakalelo, amaqela asebenza kakhulu, ukhuseleko kwindawo yokusebenza, ulawulo lwexesha, ukwakha iqela, inkonzo yabathengi, izakhono zombutho kunye nobunkokeli obunenguqu.
Kwindawo yezempilo, iPET Hodges Connect ibonelela ngeeklasi kwiNkxaso yoBomi esiSiseko, isiQinisekiso seNkxaso yoBomi esiSiseko, kunye neQeqeshi loNcedo lokuQala lweCardiopulmonary Resuscitation. Isixhobo sangaphandle seDefibrillator.
Iyeza kungekudala, iminikelo emitsha yendawo yetekhnoloji, kubandakanya i-AUTOCAD kunye neAdobe Software.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nePET Hodges Connect, imeyile IHodgesConnect@Hodges.edu Okanye u tyelele Iindlela.Hodges.edu/HodgesConnect.
tags: #HodgesConnect, uqeqesho, Umsebenzi